Rose of Sharon: March 2013
ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြန်ဆင်ခြင်မိတာက..... မသိချင်ယောင်ဆောင်နေလိုက်ရတာတွေ အတော်များနေပြီဆိုတာ
ကျန်းမာရေး... ဇရာကထောက်လာလေ ကျန်းမာရေးကအနိုင်ကျင့်လေ... ဆေးရုံဆေးခန်းသွားရမှာ ပျင်းပါတယ်ဆိုမှ
နားထောင်ဖြစ်နေတာက.... သူများပြောတဲ့ကိုယ့်အကြောင်းတွေ (ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဆင်ခြင်ဘို့)
ရွတ်ဖြစ်နေတဲ့ကဗျာက..... ကဗျာတွေမရွတ်ဖြစ်ဘူးရယ်... ဘုရားသာတမိတာအကြိမ်ကြိမ်... အဲဒါတွေဟာကဗျာများလား
ဖြစ်ချင်နေတာက..... ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်လာတာမှမဟုတ်တာ... ဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်လာခွင့်မရှိတဲ့လမ်းကို ရွေးချယ်ခဲ့ပြီမို့ ဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေကိုဘဲ ရောင့်ရဲဘို့ကြိုးစားနေသူ
လွမ်းနေမိတာက…. မလွမ်းတတ်အောင်ကြိုးစားနေထိုင်တတ်သူမို့ လွမ်းမနေမိဘူးဘဲဆိုပါတော့
မေ့လျှော့ပစ်နေရတာက…. အများကြီးပါဘဲ… ဘဝဆိုတာအကောင်းအဆိုးဒွန်တွဲနေလေတော့ အဆိုးတွေကိုမေ့ပစ်ချင်နေတာပါဘဲ
ဆန္ဒမရှိတဲ့နေရာ…. ယောက္ခမအိမ် (ဒါဟာဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲမဲ့အဖြေ)
မုန်းတီးနေမိတာက…. ဘာကိုမှမမုန်းပါဘူး… မုန်းလိုက်တာဆိုတဲ့စကားမျိုးကိုတောင်မပြောဖြစ်ဘို့ကြိုးစားပါတယ်
အဲမေးခွန်းတွေကဒါဘဲလား… ဖြေကြည့်လို့တောင်မဝသေးဘူး…ပြီးသွားပြီ :D
Posted by rose of sharon at 11:35 AM6comments: Links to this post
Happy 7th birthday my lovely son "Mickey".You are growing up now. But it is no matter to me how much has you grown. You are still the same little boy to me who first learned to walk by holding my finger.
You are the most charming gift which I have received from God. Happy Birthday to my son who is my life!
Posted by rose of sharon at 10:18 PM 10 comments: Links to this post
Posted by rose of sharon at 10:23 AM 20 comments: Links to this post